घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू नर्वेजियन फुटबल खेलाडीहरू अलेक्ज्याण्डर Sorloth बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य
हाम्रो अलेक्ज्याण्डर Sorloth जीवनी उनको बचपन कहानी मा तथ्या .्क चित्रण, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेमिका / पत्नी हुन (Lena Selnes), नेट मूल्य र जीवनशैली।
संक्षेपमा, हामी तपाईंलाई नर्वेको पेशेवर फुटबलरको इतिहास बताउँदछौं जुन अक्सर उत्तर को राजा। Lifebogger आफ्नो शुरुआती दिन देखि शुरू हुन्छ, जब उनी प्रसिद्ध भयो। तपाईको आत्मकथा भूखलाई छेड्न यहाँ ग्यालरी उठाउनको लागि एउटा सानो झण्डा हो - अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथको बायोको एक सारांश।
अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथको जीवन इतिहास।
जस्तै मार्टिन Odegaardसबैलाई थाहा छ उसको गतिको शक्ति र बौद्धिकतालाई। यद्यपि केवल केही फुटबल उत्साहीहरूलाई अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथको जीवन कहानी थाहा छ जुन प्रेरणादायक हो। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth बचपन कहानी:
जीवनी सुरुआतकर्ताहरूको लागि, स्ट्राइकरको उपनाम "नयाँ हलान्ड" हो। अलेक्ज्याण्डर सोलोथको जन्म डिसेम्बर १51995 of मा उनको आमा, हल्डेगुन रोटेन र बुबा गोरन सोलोलोथको बीचमा भएको थियो।
अगाडि उनीको गृहनगर ट्रान्डाइमको स्ट्रिन्डहिममा दुई बहिनीहरू - करोलिन र एमालीसँग हुर्केका थिए। सहरमा हुर्केका, सोलोलोथ ऊर्जा र एड्रेनालाईनले भरिएका थिए। तसर्थ, उहाँ सक्रिय रूपमा तीन खेल मा भाग लिन सक्छ। तिनीहरूले आइस स्केटि,, ह्यान्डबल र फुटबल समावेश गर्दछ।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth परिवार पृष्ठभूमि:
त्यतिबेलाका केटा यसमा थिए, उसलाई उनका मध्यमवर्गीय अभिभावकहरूको समर्थन थियो। उनीहरूले उनलाई र उसको बहिनीहरूलाई अभाव बिना हुर्काए र सुनिश्चित गरे कि उनी स्वतन्त्र रूपमा निर्णय गर्न चाहन्छन् कि उनी कस्तो खेल खेलाडी बनाउन चाहन्छन्।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth परिवार मूल:
नर्वेजियन एक उपयुक्त शब्द हो जुन हड्तालको राष्ट्रियता वर्णन गर्दछ। उनको जातीयता निर्धारण गर्न गरिएको अनुसन्धानका नतीजाहरुमा उनी इन्ट्र्रोन्डस्क जातीयता को सम्भावना प्रस्तुत गर्दछ कि तल चित्रहरुमा देखाईएको छ।
ऊ सब भन्दा नर्वेको क्षेत्र हो जसलाई इन्ट्रान्डस्क जातीयताले छोपेको छ।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth फुटबल कहानी:
नार्वेजियनले फुटबल छनौट गरे किनकि यो उनको सबैभन्दा ठूलो जोश बने। सोलोलोथका बुबा - जो एक पूर्व पेशेवर फुटबलर हुन् - त्यो छनौटसँग खुसी थिए। उनले उनलाई खेलप्रति शतप्रतिशत प्रतिबद्धताको आरोप लगाए र स्थानीय फुटबल क्लब रोजेनबर्गमा युवा एकेडेमीमा उनको नामांकन देखे।
रोजेनबर्गसँग आफ्नो क्यारियर निर्माणको क्रममा स्ट्राइकरको एक दुर्लभ तस्बिर।
सोकर प्रोडिजि रोसेनबर्गको स्तरमा उत्रियो र उनले १ professional वर्षको उमेरमा क्लबको लागि व्यावसायिक खेलाडीको शुरुआत गरे। पहिलो घटना सोरलोथ सजिलै बिर्सिन सक्दैन किनभने यो यूरोपा लिग क्वालिफाइ match खेल थियो र उसले १२ मिनेट पछि आयो। बेन्च बन्द
अलेक्ज्याण्डर Sorloth जीवनी - फेम कहानी प्रख्यात:
जब बढ्दो अग्रणी बोडो ग्लिमटलाई edण दिइयो उनले फुटबल छोड्ने विचारहरूको मनोरन्जन गर्न थाले। उनले नर्वेको अखबार भिजीलाई भने कि:
“म कति राम्रो थिएँ रोजेनबर्गलाई देखाउने मौकाहरू थिए तर म त्यसो गर्न असफल भएँ। जब म बोडो सरे, म एक दु: खी, अँध्यारो अपार्टमेन्टमा बस्थें। मैले खेल खेल्ने विचार पनि गरिरहेको थिइनँ। ”
भाग्यवस, सोलोलोथले आफ्ना बुबासँग प्रेरणादायक कुराकानी गरे जसले उसलाई हार नमान्ने निर्णय गरे। निर्णय बोडो संग एक असाधारण मौसम थियो।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth बायो - सफलता कहानी:
ग्रोनिंगेन र मिडजिलल्याण्डको पछि ट्रान्सफरमा उसको राम्रो फार्मले क्रिस्टल दरबारको चासो लिन थाल्यो जसले उनलाई २०१ 2018 मा हस्ताक्षर गर्‍यो। दुःखको कुरा, सोलोलोथले पर्याप्त प्लेटाइम पाएनन्। वास्तवमा, उहाँसँग केवल केवल Pre प्रिमियर लिग २० प्रदर्शनमा सुरू हुन्छ।
नियमित पहिलो टीमको अवसरहरू खोज्दै, सोलोलोथ जेनकमा स्विच गरे जहाँ उनले /णमा २०१//१2018 सत्रको दोस्रो भागमा बिताए। अगाडिको सफलता अर्को अभियान मा आयो जब ऊ Turkishण मा टर्की शीर्ष उडान पक्ष Trabzonspor सामेल भयो। उनले २ 19 पटक नेटको पछाडि भेटाए र डिभिजनको शीर्ष स्कोरर बन्न Super 24 सुपर लिग खेलहरूमा नौ जना सहयोग दिए।
नर्वेको राष्ट्रिय टीमको लागि खेल्दा (सँगसँगै) ईरलिंग ब्रुट हालान्ड) यूईएफए नेश्नन्स लिगको दुई समूह खेलहरूमा, सोलोलोथ ट्राब्जोनस्पोरमा फर्केनन्। यसको सट्टा, उसले यसको लागि हस्ताक्षर ntण दियो जुलियन नागेल्समानको RB Leipzig सेप्टेम्बर २०२० मा र बुन्डेस्लिगामा बढी प्राप्त गर्ने देखिन्छ। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
Lena Selnes, अलेक्ज्याण्डर Sorloth प्रेमिका बारे:
सफल फुटबलर पछाडि, त्यहाँ साँच्चै एक ग्लैमरस WAG छ। के तपाईं Lena Selnes नामसँग परिचित हुनुहुन्छ? यो सिकन्दर Sorloth प्रेमिका को नाम हो। तिनीहरूaबर्ष भन्दा बढि रोमान्टिक सम्बन्धमा छन्। वास्तवमा, अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथ प्रेमिका उनीसँग २०१4को शुरुवातको साथ थियो जब उनी एफसी ग्रोनिंगेनमा सामेल भए।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth उसकी प्रेमिका लेना Selnes साथ।
लभबर्डहरू जसको कुनै छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) विवाहबाहिर हुन्छन् प्राय: छुट्टीमा सँगै जान्छन्। त्यहाँ एक श other्का छैन कि तिनीहरू एक अर्काको कम्पनी मन पराउँछन् र लामो समय लाग्न सक्छ कि तिनीहरू तल गएको बाटोमा हिंड्नु भन्दा पहिले।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth परिवार जीवन:
जब पनि अगाडि फुटबल मा आफ्नो जीवन कहानी र यात्रा मा प्रतिबिम्बित हुन्छ, उसले केहि व्यक्तिको भूमिका को सराहना गर्दछ। तिनीहरू उसको परिवार हुन्। हामी तपाईलाई अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथका अविभावकहरूको बारेमा तथ्य ल्याउँदछौं। थप रूपमा, हामी यहाँ उसका भाइबहिनीहरू र आफन्तहरूको बारेमा तथ्यहरू प्रदान गर्नेछौं।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth बुबा मा अधिक:
गोरन प्रभावशाली अगाडि बुबा हुन्। हामीले माथि उल्लेख गरेझैं ऊ एक पूर्व पेशेवर फुटबलर हो र त्यस मध्ये एक प्रभावशाली छ। सोलोलोथ एउटा घरमा हुर्किए जससँग पदक र सम्मानहरू थिए जुन तिनका बुबाले १ 14 वर्षको स्ट्राइकरको रूपमा उनको जीवनकालमा कमाए। गोरनको सोलोलोथसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ जो उनका एक मात्र छोरा हुन्। सुधारको आवश्यकता रहेको आफ्नो गेमप्लेको क्षेत्रहरूमा सल्लाह दिन उहाँ प्रत्येक म्याच पछि कल गर्नुहुन्छ।
अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथ आमाको बारेमा:
हिल्डेगुन रोटेन अग्रगामी आमा हुन्। उनी ह्यान्डबल उत्साही छिन् जसले आफ्ना भाइबहिनीहरूसँग फुटबल प्रतिभा बढाउन मद्दत गर्छिन्। उनी भर्खर सोलोलोथको लेइपजिगसँगको वार्तालापपछि नजिकै आएकी थिइन् र मोहरबन्दी सम्झौताको खबर पाउँदा खुसी भए।
के तपाई स्टर्करको अभिभावकलाई भेट्न सक्नुहुन्छ?
अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथ भाई बहन र आफन्तहरूका बारे:
यस अग्रेषित दुई साना ज्ञानी बहिनीहरू छन् - कारोलिन र एमाली - तर कुनै चिन्ता छैन। उसको पुर्खा मा अस्पष्टता को एक कफन छ, विशेष गरी यो आफ्नो बुवा र मामा हजुरबा हजुरआमा सम्बन्धित छ। न हामी उसका काका, काकी, काकी, भतिजा, भतिजा र भतिजीहरू चिन्न सकेनौं।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth आफ्नो बहिनी अमली संग।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth व्यक्तिगत जीवन:
फुटबल बाहिर, अगाडी एक साहसी, मिलनसार र रमाईलो-मायालु व्यक्ति भनेर चिनिन्छ। ऊ आफैंमा उच्च बोल्दैन र विनम्रताको खातिर आफ्नो शक्तिको पतन गर्न खोज्छ। उसको व्यक्तित्वको एक भागमा, सोलोलोथ धेरै प्रशंसकहरू बोल्ने मानिसका पक्षधर छैनन् - Hurriyet मा अधिक पढ्नुहोस्.
यात्रा, खाना पकाउने, पौडी खेल्ने र चलचित्रहरू हेर्ने कुरा उनका सोखहरूको सूची हो। ऊसँग स्केटिंग र ह्यान्डबल खेल्ने कुरामा पनि रूचि छ, जस्तो कि यो सँधै उसको बाल्यकालको दिनदेखि नै भएको छ।
खाना पकाउनु उसको एउटा सोख हो।
अलेक्ज्याण्डर Sorloth जीवन शैली:
कसरी अगाडि आफ्नो पैसा बनाउँछ बारेमा कुरा गरौं र आफ्नो खर्च ढाँचा प्रकृति। सुरु गर्न, २०२० मा अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथको कुल सम्पत्ति अझै समीक्षाको अधीनमा छ। न त उनको तलब संरचना आरबी लाइपजिगका साथ सार्वजनिक छानबीनका लागि उपलब्ध छ।
जे होस्, हामीलाई थाहा छ कि उनले जर्मन क्लबसँग जे जे गरे पनि जुन उसले क्रिस्टल प्यालेसमा कमाउँथे प्रतिवर्ष 936,000 XNUMX XNUMX .,००० को सुधार हुनेछ।
जब हामीले खातामा बोनस र प्रायोजन खेल्दै अनुमोदन लिन्छौं, तब हामीले महसुस गर्‍यौं कि सोलोलोथको विशाल सम्पत्तीको आधार हुन्छ। उसको विनम्रताले उनलाई उसको विलासी जीवनशैली फुल्काउनबाट जोगाउँदछ जसमा महँगो घरमा बस्नु र पोश कार चलाउनु समावेश छ।
अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथको बारेमा तथ्यहरू:
स्ट्राइकरको बारेमा यस आकर्षक बायो लाईrap्ग राख्नको लागि, उहाँको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १- अलेक्ज्याण्डर Sorloth RB Leipzig वेतन:
यूरो मा आरबी लेपजिग आय (€)
प्रति वर्ष € 2,916,480
प्रति महिना € 243,040
प्रति हप्ता € 56,000
प्रति दिन € 8,000
प्रति घण्टा € 333
प्रति मिनेट € 5
प्रति सेकेन्ड € 0.09
तपाईंले अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथ हेर्न शुरू गर्नुभयोबायो, यो उसले आरबी लाइपजिगसँग कमाएको हो।
तथ्य # १- चेल्सी फ्यान:
बच्चाको रूपमा हुर्केका, सोलोलोथ चेल्सी एफसीको प्रशंसक थिए जसलाई ब्लूज पनि भनिन्छ। यो युगको अवधिमा थियो जसमा अ side्ग्रेजी पक्षले जियानफ्रेन्को जोला, तोरे एन्ड्रे फ्लो र पछाडि ताराहरू थिए Didier Drogba जसले धेरै मन जित्यो।
नर्वेको overall१ को सम्भावितताको साथ overall 77 अंकको कम समग्र फिफा रेटिंग छ। उसको रेटिंग्स उल्का अनुपातमा सुधार हुने सम्भावना रहेको कुनै बहस छैन। विशेष गरी जब उनले युरोपको सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी लिगहरू मध्ये एक खेल्न साइन अप गरिसकेका हुन्छन्। सत्य यो छ, उनीसँग फिफामा नराम्रो व्यवहार गरिएको छ जस्तै सँगी नर्वेजियन, यहोशू राजा.
सबै फुटबल ग्रिट्ससँग नम्र शुरुआत छ?
उक्त स्ट्राइकरले २०२० सम्ममा उनको धर्मको बारेमा अझै सुराग दिन सकेको छैन। तैपनि, यी कठिनाइहरू उसको विश्वासको पक्षमा र सम्भवतः एक इसाईको पक्षमा छन्। अझ त्यसमाथि, उनकी दिदी क्यारोलिनको एक मसीही नाम छ।
तथ्य # १- अलेक्ज्याण्डर Sorloth उपनाम को बारे मा:
फुटबल प्रतिभाको उपनाम "नयाँ हलान्ड" हो किनकि ऊ आफ्नो देशवासीको जस्तो खेल्छ ईरलिंग ब्रुट हालान्ड। जोडी पनि उही उचाईको र एउटै कपालको रंग छ।
हालान्ड र सोलोलोथको धेरै समान छ।
हाम्रो अलेक्ज्याण्डर Sorloth जीवनी पढ्न को लागी धन्यवाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न प्रेरित गर्दछ कि हार मान्नु कहिल्यै अस्वीकृत हुँदैन। उनी बोडो ग्लिफ्टलाई edण दिए पछि फुटबल खेल्न छाडे भने उनी आज हुने थिएनन।
हामीले अलेक्ज्याण्डर सोलोलोथका आमा बुबालाई उनीहरूको क्यारियरमा अटुट समर्थनका लागि श्रेय पनि दिनुपर्दछ। उनीहरूको प्रभाव जुन हामीले सोलोलोथको जीवनी तथ्यांकमा कब्जा गर्‍यो अनुकरणको लागि योग्य छ।
Lifebogger मा, हामी सही र निष्पक्षताका साथ जीवनी तथ्या deliver्कहरू प्रदान गर्नमा गर्व गर्दछौं। के तपाईले केहि देख्नु भएको छ जुन यस लेखमा ठिक लाग्दैन? हामीलाई सम्पर्क गर्न वा टिप्पणी गर्न राम्रो गर्नुहोस्।
उपनाम "नयाँ हालान्ड"
जन्म मिति डिसेम्बर १5December 1995th को XNUMXth औं दिन
जन्मस्थान नर्वे मा Trondheim को शहर
खेल्ने स्थिति स्ट्राइकर
आमाबाबुले हिल्डेगुन रोटेन (आमा) र गोरन सोलोलोथ (बुबा)
भाई बहिनीहरू क्यारोलिन र एमाली (बहिनीहरू)।
प्रेमिका Lena Selnes
नेट मूल्य समीक्षा अन्तर्गत
तलब € 1,614,480
सोख यात्रा, पौडी खेल्ने र चलचित्रहरू हेर्दै